Ndị Channels Television na-akọwa na ndị ntọ atọrọla Asime Sekibo, nwunye onye omebe iwu bụ Sinetọ George Thompson Sekibo. George Sekibo na-anọchite anya ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ Steeti Rivers bụ Rivers East Senatorial District.
Ndị o ji egbe atọrọ tọọrọ Asime Sekibo n’ụbọchị Tọzdee na Port Harcourt. Nwanyị a si mahadum (University of) Port Harcourt, ebe ọ na-agụ akwụkwọ, ala be ya mgbe ndị ntọ a wakporo ya. A tọọrọ Asime na mmadụ abụọ ndị ọzọ. Ihe a mere ebe elekere asaa nke mgbede na Obiri Ikwere Bridge.
Anyị nwetere ozi na ndị ntọ ahụ na di nwanyị a amalitego ikpa nkata, mana anyị amabeghị ego ole ha si ya kwụọ maka igbapụta nwunye ya.